सत्यको मुखा, रोममा क्लासिक | यात्रा समाचार
रोम यो एक सुन्दर शहर हो। मलाई यो मनपर्दछ किनकि तपाईं दिनभर हिंड्न सक्नुहुन्छ र हरेक क्षण चौरमा, आकर्षक सडकहरू, रोमन भग्नावशेषहरू, मध्यकालीन भवनहरू वा पुरानो र लुकेका चर्चहरूमा आश्चर्यचकित हुन्छन्। म रोमलाई माया गर्छु!
क्लासिक भनेको कल हो सत्यको मुख जुन ठीक पुरानो चर्चमा छ, Cosmedin मा सान्ता मारिया को चर्च। सिनेमाले यसलाई क्लासिक बनाएको छ त्यसैले यहाँ पर्यटकहरूको कुनै कमी छैन जुन यहाँ वरिपरि आउने आउँछन् उनीहरूको मुखमा आफ्नो हात राख्नको लागि केही डरको साथ…।
La बोका डेला भेरिटि यो मा छ सर्वो चर्चको तर यो के हो? यो केवल एक pavonazzetto संगमरमरको मास्क हो जुन प्रमोसमा राखिन्छ, जुन मन्दिरको अगाडि छ। यो विशिष्ट ठाउँ हो जुन ग्रीक र रोमी मन्दिरहरूमा देख्न सकिन्छ र यो लबी वा प्रवेशद्वारमा आउँदछ।
सत्यको मुख यो Cosmedin मा सान्ता मारिया को Basilica भित्र छ। यो चर्च रिपामा छ र मूल रूप बाट हो XV शताब्दी। बोरोओ फोरममा र स्ट्याटिओ एनोनेको नजिक रोमनको मन्दिर, टेम्प्लम हर्कुलिस पोम्पेयनीको अवशेषमा अरू धेरै मानिसहरूजस्तै चर्च पनि बनेको थियो, जहाँ खाना वितरण गरिएको थियो।
सत्रौं शताब्दीमा चर्चलाई बाइजान्टिन शैलीको भवनहरूले घेरेको थियो, त्यसैले यसलाई भनिन थालियो Schola Graeca। पछि, ग्रीक भिक्षुहरू जसले आइकोनोक्लास्टिक सतावटहरूबाट भागेका थिए XNUMXth औं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा यसको पुनर्निर्माण र सजावट भयो। त्यतिन्जेल यो फाराम परिवर्तन भयो र पोर्टिको र तीन नाभाहरू प्राप्त गर्‍यो। एक शताब्दी पछि एक वक्तृत्व र एक पवित्र धर्म निर्माण गरियो।
त्यसबेलादेखि यस चर्चको इतिहासमा ठाउँ छ यहाँ तीन पोपहरू छानिएका थिए, गिलासियस दोस्रो, सेलेस्टाइन III र बेनेडिक्ट XIII। ती दुई मध्ये एकै चर्चको कार्डिनल थिए। पछि, इतिहासले त्यो बताउँछ यो १२ औं शताब्दीमा पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित भयो, बेनेडिक्टिन हातहरू पार गरेको र संक्षिप्त बारोक शैली मा सजाइएको थियो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, चर्चको आफ्नै इतिहास र प्रख्यात बोका डे ला वरदद भन्दा परको आफ्नै सम्पत्ती छ।
तपाईं उच्च गाउँको गाउँलेको छेउछाउ देख्न सक्नुहुन्छ जुन उच्च मध्य युगको हो, यसको कोसमेट्सक फुटपाथ, मध्य युगको इटालीको विशिष्ट शैली, विशेष गरी रोममा, जुन संगमरमरले बनेको थियो जुन प्राय: रोमी भग्नावशेषहरूबाट लिइएको थियो र ज्यामिति सुन्दर बनाइएको थियो। १० औं शताब्दी अघि र पछाडि सुन्दर चित्रहरू पनि छन्, वेदीमा ११२२ देखि रातो ग्रेनाइटको एउटा टुक्रा छ र पुरानो सेन्ट पिटर बेसिलिकाको मोजेकको पवित्र धर्मको भागमा।
ला बोका डला भेरिटि, मैले माथि भनें, यो एक pavonazzetto संगमरमरको मास्क हो। यो संगमरमर सेतो हो, कहिलेकाँहि खैरो सुनको रंगको रंगको हुन्छ र नाम मोरको पुच्छरको रंगबाट आउँदछ। यो टर्कीको फ्रिगियाको खानीबाट प्राप्त भएको हो र यो पुरानो रोममा धेरै लोकप्रिय थियो, विशेष गरी जब यो गहना वा स्तम्भहरू बनाउने काममा आउँथ्यो।
यो मास्क एक गोल टुक्रा हो जुन मिति १ शताब्दीमा सम्बन्धित छ। व्यास १.1 मिटर र उत्कीर्ण गरिएको छ दाह्री पुरुष अनुहार नाक, आँखा र मुखमा प्वालहरू छिद्रित छन्। वरिपरि तौल 1300 किलो र यो विश्वास गरिएको छ कि खोपेको अनुहार सागर देवताको हो।
वास्तवमा यो निश्चित रूपमा थाहा छैन कि यसको कार्य मूलतः के हो, यदि पानी यसको रूखहरूबाट बाहिर आयो र झरनाको अंश थियो, यदि यो ढलको ढक्कन थियो भने पनि, किनकि हर्कुलस भिक्टोरीको मन्दिर नजिकै छ। यो ज्ञात भएको नाम १ 1485 मा प्रसारित हुन थाल्छ र त्यसपछि कम वा कम यसलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ र यसैले यो ज्ञात छ कि शुरुमा म बाहिर चर्चको दलानमा थिएँ, र त्यो पछि यो भित्री भागमा सारियो, १ 1631१ को आसपास।
तर डरको साथ आफ्नो मुख भित्र आफ्नो हात राख्ने को बानी कहाँ आउँछ? यो विभिन्न जर्मन पदहरु देखिन्छ। तीमध्ये एक, १२ औं शताब्दीले भनेको छ कि मुख पछाडि शैतान हो र एक दिन उसले आफ्नी पत्नीलाई धोका दिएका थिए र आफ्नो प्रतिष्ठा सफा गर्ने र आफ्नो भाग्यलाई हस्तान्तरण गर्ने शपथ खाएको जुलियान, अपोस्टेटको हात समात्यो। मूर्तिपूजाको फिर्ताको लागि। अर्को कथामा, दुई शताब्दी पछि, एक व्यभिचारी आइमाईको हात टोक्ने मुखको कथा देखिन्छ।
एउटा चीज र अर्को र त्यहाँ हामी एक दंतकथा को जन्म छ। परिवर्तनको लागि, यस्तो लाग्छ यो महिला व्यभिचार पत्ता लगाउन आदर्श थियोजे भए पनि, सत्यको मुखा रोम र यात्रा गर्ने सबै बीच लोकप्रिय भयो सिनेमाले लोकप्रियता बढायो।
को हातबाट रोममा छुट्टीहरू, एक १ 1953। classic क्लासिक तारांकित ऑड्रे हेपबर्न र ग्रेगरी प्याक, बोका डेला भेरिटि निस्सन्देह परिचित भयो। यदि तपाईंले फिल्म देख्नु भएन भने रोम जानु भन्दा पहिले तपाईं यसलाई देख्न सक्नुहुनेछ। निस्सन्देह, आशा छ कि त्यहाँ मान्छे राम्रो संगै छन्, वास्तवमा यो एक धेरै लोकप्रिय साइट हो।
सत्यको मुख यो सर्को मासिमोको नजीक छ। तपाईं यस नामको सडकमा हिड्नुहुन्छ, जुन एक निश्चित क्षणमा भाया डेला ग्रीका बन्छ र त्यहाँ तपाईं पहिले नै चर्च र भीडभाडित मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन आफ्नो पालोको लागि कुर्दै मार्बलको पुरानो टुक्रामा पर्खिरहेका थिए।
समय बिहान9देखि साँझ6सम्म र हुन् प्रवेश निःशुल्क छ। जाडोमा त्यहाँ कम मानिस छन् र घण्टा बिभाजित छ, बिहान १० देखि १२ बजे र साँझ 10 देखि from सम्म। यो उही समय हो जतिबेला चर्चले चारै तिर हिड्न नबिर्सनुहोस् जुन मैले तपाईंलाई पहिले बताएको सबै आकर्षणहरू हेर्नको लागि हो।
के तपाई इटाली जाँदै हुनुहुन्न? त्यसोभए तपाईले यसको प्रतिक्रियाहरू मध्ये कुनै एक देख्न सक्नुहुन्छ: लक्जमबर्ग गार्डनमा एउटा छ, पेरिसमा, अर्को क्यालिफोर्नियाको अल्टा भिस्टा गार्डनहरूमा, र यदि तपाईं क्यासिनो जानुहुन्छ भने तपाईं स्लट मेसिनहरूमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ। हो!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » रोम » सत्यको मुखा, रोमको क्लासिक
सबै भन्दा राम्रो क्रिसमस बजार